Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Russia sy San Marino miasa amin'ny dia maimaimpoana maimaimpoana amin'ny visa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Vaovao Mahafaly San Marino • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Raha ny filazan'ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana Lavrov dia manantena i Russia fa raha vantany vao miova ny toe-draharaha ara-pahadiovana sy areti-mifindra, dia "hiaina ny fifanakalozana fizahan-tany izay tena malaza" ny roa tonta.
Russia sy San Marino miasa amin'ny fifanarahana fitsangatsanganana tsy misy visa.
Fifanarahana momba ny dia tsy misy visa any Russia-San Marino hosoniavina tsy ho ela.
Malaza ny fizahan-tany eo amin'i San Marino sy i Russia, hoy ny minisitra Lavrov.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana Sergey Lavrov dia nanambara androany taorian'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny sekreteram-panjakana misahana ny raharaham-bahiny any San Marino, Luca Beccari, fa ny fifanarahana momba ny fitondrana visa tsy misy visa eo amin'ireo firenena roa tonta dia saika vita ary hovahana amin'ny fomba ofisialy amin'ny ho avy akaiky indrindra.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana Sergey Lavrov miaraka amin'ny sekreteram-panjakana misahana ny raharaham-bahiny any San Marino, Luca Beccari
“Manana fifanarahana ifotony izahay mba hanafainganana ny asa amin'ny fifanarahana eo amin'ny fitondrana momba ny dia tsy misy visa ho an'ireo teratany roa tonta. Vonona ny fifanarahana ary heveriko fa hikarakara ny fanaovan-tsonia tsy ho ela izy ireo, ”hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana.
Rosiana Minisitry ny raharaham-bahiny Lavrov, Russia dia manantena fa raha vantany vao miova ny toe-draharaha ara-pahasalamana sy areti-mifindra, dia "hamelona ny fifanakalozana fizahan-tany izay tena malaza" ny roa tonta.
San Marino dia microstate tendrombohitra voahodidin'i avaratra-afovoany Italia. Anisan'ireo repoblika tranainy indrindra eto an-tany, mitazona ny ankamaroan'ny maritrano manan-tantara izy io. Eo amin'ny tehezan'i Monte Titano no misy ny renivohitra, antsoina koa hoe San Marino, fantatra amin'ny tanàna antitra misy rindrina antonony sy arabe vatolampy tery. Ny Towers Three, citadels sahala amin'ny krylta nanomboka tamin'ny taonjato faha-11, dia mipetraka eo an-tampon'ny tampon'ny havoana Titano.
San Marino dia tsy mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana na faritra ara-toekarena eropeana. Na izany aza, mitazona sisintany misokatra miaraka amin'i Italia izy. Satria San Marino no azo idirana amin'ny alàlan'ny Italia tsy azo atao ny miditra raha tsy miditra amin'ny faritra Schengen aloha ary noho izany dia mihatra ny lalàna Schengen visa. Ireo mpitsidika vahiny mipetraka 10 andro mahery any San Marino dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana avy amin'ny governemanta.
San Marino dia nanao sonia ireo fifanarahana tsy miankina visa tsy miankina izay manan-danja ara-panoharana ho an'ireo teratany vahiny saingy misy akony amin'ireo tompona pasipaoro San Marino. San Marino dia nanao sonia fifanarahana tsy misy visa toy izany miaraka amin'i Arzantina, Austria, Bosnia sy Herzegovina, Bulgaria, China, Finland, Hungary, Japan, Kenya, Latvia, Lithuania, Morocco, Portugal, Romania, Slovenia, ary ny United Kingdom ho an'ireo tompona pasipaoro tsotra .
Ho fanampin'izany, nisy ihany koa ny fifanarahana natao tamin'i Azerbaijan, Gambia, Moldova, Eswatini, Tonizia, Torkia, ary Oganda ho an'ireo manana pasipaoro diplomatika sy serivisy.